धावनमार्गको कालोपत्रे भत्किएपछि जहाज उडान/अवतरणमा समस्या | जनदिशा
काठमाडौं। त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग भत्किँदा पछिल्लो समय हरेक दिन जसो उडान/अवतरणमा समस्या आएको छ ।
साउन लागेयता दर्जनौंपटक धावनमार्ग भत्किँदा जहाज उडान/अवतरणमा प्रत्येक दिन समस्या देखिन थालेको छ । आजको कारोबारले पहिलो पृष्ठमा समाचार छापेको छ ।
५० बर्ष पुरानो धावनमार्गको कालोपत्रे पछिल्ला बर्षहरुमा टालटुलमा जहाज उडान/ अवतरण गराउँदै आइएको छ ।
पछिल्लो सातामात्रै दैनिक पाँच पटकसम्म धावनमार्गको कालोपत्रे उप्कँदा ४५ मिनेटदेखि डेढ घण्टासम्म आकाशमा जहाज होल्ड गर्नुपरेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ ।
विगत लामो समयदेखि नयाँ कालोपत्रे गर्ने भने पनि टेन्डर प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न नसक्दा प्रत्येक बर्ष समस्या बढ्दै गएको छ ।
Previous Previous post: प्रधानमन्त्रीद्वारा दलबीच भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने तयारी !
Next Next post: २५ अाैं दिनमा सरकारी टोली र डा. केसी पक्षबीच वार्ता, यस्तो भयो सहमति (विज्ञप्तीसहित)